[Review] Mặt nạ vàng 24k có thật sự thần thánh như lời đồn? | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Mặt nạ vàng 24k có thật sự thần thánh như lời đồn? | Muasalebang in Muasalebang
Ababaningi abantu abazi, kusukela ezikhathini zasendulo, igolide likhethiwe ngobuhle. Kusukela ngaleso sikhathi, ososayensi abaningi baye bahlola ukusetshenziswa okumangalisayo kwegolide esikhumbeni. Omunye waleyo mikhiqizo 24k imaski yegolide. Ngokushesha bheka amasheya angezansi uma ufuna ukwazi ulwazi olwengeziwe mayelana nolayini imaski lokhu.
1 Iyini i-24K Gold Mask?
2 Ingabe imaski yegolide engu-24K ilungile?
3 Ukubuyekezwa kwezinhlobo ezi-4 zamamaski egolide wekhwalithi okufanele ubhekisele kuwo
3.1 3.1 Imaski Yegolide YaseKorea 24k Imaski Yegolide L-Glutathione
3.2 3.2 Imaski ye-collagen eyigolide yolayini we-3w Clinic Luxury Gold Peel Off Pack
3.3 3.3 I-Casmara Gold Mask Luxury Algae Peel-Off line
3.4 3.4 I-Natura Siberia 24k Imaski Yegolide
4 Ungayisebenzisa kanjani imaski ye-24k ngendlela efanele
4.1 Isinyathelo 1: Hlanza futhi uhlanze isikhumba
4.2 Isinyathelo sesi-2: Gcoba imaski engu-24k esikhumbeni
4.3 Isinyathelo sesi-3: Ngemva kokusebenzisa imaski, hlanza isikhumba
Iyini i-24K Gold Mask?
Kokubili eNtshonalanga naseMpumalanga, umqondo wobuhle ngenxa yegolide elingu-24k usunesikhathi eside ukhona. ENtshonalanga, 24k imaski esetshenziselwa ukumboza isikhumba kubantu basesigodlweni sobukhosi abasezikhundleni eziphezulu, i-aristocracy. Ubufakazi balokhu ukuthi lapho befunda izinsalela zezikhulu zaseGibhithe, bathola igolide elihlanzekile.
Ngokuvamile, iNdlovukazi yaseGibhithe okuthiwa uCleopatra yasebenzisa igolide ukumboza isikhumba ngezinjongo zobuhle. Ngo-1969, izicukuthwane zaseNtshonalanga zasebenzisa lezi zinto ukuze zihlobise isikhumba futhi zilwe nokuguga. EMpumalanga, u-Empress Dowager Tu Hy naye wasebenzisa igolide ukuze axazulule izinkinga ezihlobene nesikhumba futhi alondoloze ubuhle.
Izindlela zobuhle ezinegolide elingu-24k zithandwa kakhulu namuhla. Imikhiqizo evela kule mpahla eluhlaza ihluke kakhulu. Ngokukhethekile, imaski yegolide engu-24k, umkhiqizo uqukethe i-essence yegolide engu-24k nezinye izithako eziningi. Inhloso ukunakekela isikhumba esibuyiselwe kakhulu.
Ingabe imaski yegolide engu-24K ilungile?
Ku 24k imaski iqukethe izithako eziyinhloko i-essence yegolide ne-collagen, ngakho-ke kuhle kakhulu ukusetshenziselwa ukunakekelwa kwesikhumba. Ngemva kokuyisebenzisa isikhashana, uzothola ezinye zezinzuzo ezilandelayo:
Ukuthuthukiswa kokushwabana: Ukwakheka kwesikhumba kuzokhuthaza ukulungiswa ngenxa yokuntuleka kwe-collagen ngenxa yezithako zegolide ze-collagen ne-nano. Imigqa emincane nemibimbi kubonakala kufiphele. Isikhumba sicwebezela kakhulu, sibushelelezi, sinwebeka kakhulu, sivuseleleka kakhudlwana.
Gcwalisa ukuntula kwe-collagen esikhumbeni okubangelwa inqubo yokuguga.
Ikhuthaza ukuphulukiswa nokuvuselelwa kwamaseli alimele. Ngaphandle kwalokho, ama-ion amaningi e-essence yegolide asekela ukujikeleza kwegazi, akhuthaze ukuvuselelwa kwamangqamuzana.
Bulala amagciwane, ulwe nokuvuvukala ngokunikeza amangqamuzana umoya-mpilo ukuze alungise umonakalo.
Ithambisa futhi ibuyisele isikhumba. Kulo mugqa wamaski kuqukethe ama-molecule amancane kakhulu anamanzi. Ngenxa yalokho, ingena kalula esikhumbeni ukuze inciphise ukulahlekelwa kwamanzi ebusweni besikhumba, i-moisturizing ukusiza isikhumba sihlale sithambile futhi sibushelelezi.
Isusa ubuthi ukuze kwandiswe impilo yesikhumba. I-essence yegolide inikeza ikhono lokushintshanisa ama-ion futhi isuse izinsimbi ezinzima esikhumbeni. Ngaphandle kwalokho, asiza ukuhlanza i-sebum, ukungcola, ama-pores avulekile, akhuthaze umzimba wesikhumba onempilo.
Ithuthukisa umbala ukuze isize isikhumba sikhanye kakhulu. Isizathu siwukuthi le mask ingavimbela ukukhiqizwa kwe-melanin ngaphansi kwesikhumba.
Ukubuyekezwa kwezinhlobo ezi-4 zamamaski egolide wekhwalithi okufanele ubhekisele kuwo
Emakethe, umugqa 24k imaski yegolide idonsa ukunaka kwabesifazane abaningi. Lolu hlobo lwemaski luphinde lube nemigqa eminingi nemikhiqizo ehlukene. Nalu ulwazi mayelana Izinhlobo ezi-4 zamamaski egolide Ikhwalithi akufanele uyizibe uma ufunda ukuyisebenzisa:
3.1 Imaski Yegolide YaseKorea 24k Imaski Yegolide L-Glutathione
Isithako esibalulekile ku-24k Korean Gold Mask L-Glutathione iwumthombo wegolide. Lesi sithako sikunikeza inani elihle kakhulu le-collagen. Ngaphezu kwalokho, lo mkhiqizo uqukethe i-mint, i-ginseng ebomvu … ukunakekelwa kwesikhumba kanye ne-benign moisturizing yesikhumba sobuso.
Lezi zithako zinikeza isikhumba inani elanele lamavithamini. Noma yisiphi isikhumba singaqinisekiswa ukuthi siwusebenzisa umkhiqizo. Isikhumba siyavinjelwa ukuthi singaveli imibimbi, siba bushelelezi futhi sithambe ngenxa yesithako seGlutathione. Isikhumba sikhululwa izinto eziningi ezingadingekile. Ngaphandle kwalokho, lezi zithako ezisebenzayo nazo zondla kusukela ekujuleni kwesikhumba.
Lapho usebenzisa i-Gold Mask L-Glutathione, i-essence ngayinye yegolide ingena ijule ezimbotsheni. Ubuthi buqedwa, kwakheka izimo zamavithamini kanye ne-collagen ukuze kungene ungqimba ngalunye lwe-epidermis ngezansi. Uma isetshenziswe kahle futhi njalo, uzobona ukuncipha okukhulu kwemibimbi, ukukhanya okwengeziwe, futhi kuvimbele ukuwohloka, amabala noma amachashaza eminyaka yobudala.
Intengo yesithenjwa: 210,000 VND/220 ml.
Buka Okuningi: [Review] Iyiphi imaski yokuqinisa imbobo enhle? Imininingwane yango-2021
3.2 Imaski ye-collagen eyigolide yolayini we-3w Clinic Luxury Gold Peel Off Pack
Imaski ye-collagen yegolide we-3w Clinic, ulayini we-Luxury Gold Peel Off Pack waziswa kakhulu abantu abaningi ngokulwa nokuguga, ukuthuthukiswa kokushwabana, nokwenza mhlophe kwesikhumba. Kusukela yaqala ukuvela, isheshe yakha ukukhanga okukhulu. Ngesikhathi esifanayo, ithole izincomo eziningi kubasebenzisi kanye nochwepheshe mayelana nokusebenza komkhiqizo.
Emkhiqizweni wengeze i-collagen ukusiza isikhumba sibe bushelelezi, sivimbele ngokuphumelelayo ukuguga, ukugoqa kwesikhumba kanye nemibimbi. Amaseli afile, i-acne bran, ukungcola okubangelwa indawo eyingozi nakho kuyasuswa. Ngemuva kokusebenzisa kuphela amasonto angama-1-2, isikhumba sizocwebezela kancane, sibe busha, sibe phezulu, sithambe. Isikhumba sinikezwa imisoco eminingi edingekayo.
I-Korean 24k Gold Mask Gold Mask L-Glutathione ibambezela inqubo yokuguga yesikhumba
Ngaphandle kwalokho, ukufiphalisa izindawo ezimnyama ezishiywe yizinduna, izimbotshana ziyaqina. Akugcini lapho kuphela, isikhumba sibuye sithuthukiswe ngokuvikelwa, ukuvimbela imiphumela eyingozi yemisebe ye-UV. Imaski ye-collagen yegolide ye-3w Clinic, umugqa we-Luxury Gold Peel Off Pack, usebenzisa ubuchwepheshe be-nano, ngakho-ke umphumela wokulwa nokuguga, uthuthukisa imibimbi, isikhumba esimhlophe siphezulu.
Intengo yesithenjwa: 195,000 VND/100ml.
Thola imininingwane: [Review] Imaski eyi-8 ephezulu ye-collagen yaseKorea ngemininingwane ka-2021
3.3 I-Casmara Gold Mask Luxury Algae Peel-Off line
Lona umugqa wemaski esigabeni esiphezulu. Umkhiqizo uqukethe izithako ezibalulekile ezifana nokhula lwasolwandle, uthuli lwegolide lwe-24K, amaminerali, amavithamini okusekela ukuthuthukiswa kwesikhumba, nokuhlinzeka ngemisoco edingekayo. Ukusuka lapho, sula imibimbi, isikhumba esifiphele, vuselela futhi ubuyisele amaseli esikhumba.
Isikhumba sibonakala sifakwe empilweni entsha. I-Casmara Gold Mask Luxury Algae Peel-Off line nayo ithambisa isikhumba kahle. Ngakolunye uhlangothi, ukusekela ukukhuthaza ukukhiqizwa kwe-elastin, i-collagen ngokushesha ukulwa nokuguga nokususa imibimbi ngokuphumelelayo.
Isici esivelele kakhulu somkhiqizo ukuthungwa kwe-liquid. Lokhu kusiza amavithamini nezakhamzimba ukuthi zingene esikhunjeni ngokushesha. Iphuzu elilandelayo elithakazelisayo yi-Casmara Gold Mask yomugqa we-Luxury Algae Peel-Off, ogcina imisebenzi esebenza kahle kakhulu yezindebe, amehlo, izindebe ezipinki, futhi inciphisa imibuthano emnyama.
Umkhiqizo ulungele yonke iminyaka nezinhlobo zesikhumba. Ifaneleka kakhulu ukuthuthukisa isikhumba esingakhazimuli kancane futhi esintula ubungqabavu. Uzozwa sengathi isikhumba sakho sinakekelwa endaweni ye-spa esezingeni eliphezulu. Izindleko zingu-1/8 kuphela wezokwelapha ezinkulu ze-spa. Ngalezi zinzuzo, zithengele lo mkhiqizo ngokushesha ukuze uzizwele ngokwakho.
Intengo yesithenjwa: 360,000 VND.
3.4 I-Natura Siberia 24k Imaski Yegolide
Okwamanje 24k imaski yegolide Lokhu kuqukethe izithako ezibalulekile okungama-ceramides aphezulu angu-100%, igolide elimsulwa elingu-24k, amaseli e-Organic ezimpande zegolide ze-photoactivity agxilile, avuselela i-neuropeptide SYN®-Ake, Complex Polysaccharides. Ngomsoco ongena ngokushesha esikhumbeni, imaski yegolide ye-Natura Siberica 24k ibhekwa njenge-anti-aging super.
Isikhumba somsebenzisi ngemva kwesikhathi siba sihle, sikhazimule futhi sigcwele ubungqabavu. Ikakhulukazi, izithako ezingenhla zibuye zikhuthaze ukuvuselelwa nokuvuselela amangqamuzana esikhumba. Ngalokhu, isikhumba sakho sisula ngokuphumelelayo izinyawo zegwababa, imibimbi, futhi siba bushelelezi. Isithako ngasinye sinokusetshenziswa kwaso kanye nezakhiwo ngale ndlela elandelayo:
Izithako ezisebenzayo Ama-Polysaccharides ahlanganisa i-collagen, akhuthaze ukukhiqizwa kwe-collagen ukunciphisa imibimbi ekubumbeni. Imibimbi ingobunye bobufakazi bokuguga kwesikhumba ngaphambi kwesikhathi.
Izithako ezingu-100% ze-ceramides zivimbela ngempumelelo izimpawu zokuqala zokuguga, zikhuthaze ukuvuselelwa nokukhula kwamangqamuzana esikhumba.
I-Neuropeptide SYN-Ake compound: Iqinisa kahle isikhumba, ivuselele futhi inciphise isikhumba esinyakazayo.
Umkhiqizo uyasebenziseka ngokuphelele futhi uphephile kubasebenzisi. Ngoba imaski ayinayo izithako eziyingozi zamafutha amaminerali, i-EDTA, i-silicone, i-paraben … Uma uyisebenzisa, uzobona ungqimba oluthambile lwekhilimu. Ungqimba lwemaski alulethi umuzwa wemfihlakalo. Kunalokho, khululeka futhi ukhululeke. Ngemuva kokusetshenziswa okungaba ngu-10-20, isikhumba siyanamathela kancane ngakho labo abangasijwayele abasithandi kakhulu.
Intengo yesithenjwa: 190,000 VND / 100ml.
Bhekisela: [Reivew] Imaski eyi-5 esebenza kahle kakhulu yekhanda elimnyama
Ungayisebenzisa kanjani imaski ye-24k ngendlela efanele
Ukuze imaski yegolide iphumelele kakhulu mayelana nokusetshenziswa, kufanele wazi ukuthi ungayenza kanjani ngendlela efanele. Imisebenzi ethize imi kanje:
Isinyathelo 1: Hlanza futhi uhlanze isikhumba
I-Sebum, ukungcola, izinsalela zezimonyo esikhumbeni zenza kalula ukumuncwa kwemisoco evela kumaski kube buthaka noma kungakhiqizi. Ngakho-ke, ngaphambi kokufaka imaski yegolide engu-24k, abasebenzisi kufanele bahlanze futhi bahlanze isikhumba sabo:
Hlanza kahle futhi uhlanze isikhumba, imisoco emaski ye-24k ingena kalula esikhumbeni
Susa izimonyo ngemikhiqizo ekhethekile efanele isikhumba uma ugcoba i-sunscreen noma izimonyo.
Sebenzisa ukuhlanza ubuso ukuze ususe amafutha amaningi, ukungcola ebusweni besikhumba esiqoqayo.
Sebenzisa amanzi e-rose ukuze uhlanze izimbotshana ezijulile ngaphakathi. Isikhumba sibuyiselwa esimweni sokulinganisela ukuze simunce ngokugcwele imisoco.
Isinyathelo sesi-2: Gcoba imaski engu-24k esikhumbeni
Kunezinhlobo ezimbili okwamanje emakethe 24k imaski yegolide Okuvame kakhulu amashubhu namaphakheji.
Ifomethi yephakheji: Abasebenzisi badabula igobolondo bese bethatha imaski ngaphakathi kwesikhwama bayisebenzise esikhumbeni ukuze ilingane.
Ifomu leshubhu: Kufanele ihlanganiswe nezinye izithako. Ufaka inani elanele le-essence yegolide endishini bese uyixuba no-30ml wobisi olusha olungenaswidi ukuze wenze inhlama. Bese, sebenzisa ingxube ebusweni, massage ngobumnene ukusiza ukumunca imisoco ngokushesha.
Isinyathelo sesi-3: Ngemva kokusebenzisa imaski, hlanza isikhumba
I-mask izoshiywa esikhumbeni cishe imizuzu engu-15. Ngemuva kwalesi sikhathi, geza ubuso bakho ngamanzi apholile. Uma imaski yobuso isiqediwe, abasebenzisi bangaqhubeka nezinyathelo zokunakekela isikhumba ezifana nokusebenzisa okhilimu, amaserum, njll. Izinkinga ezifana namabala amnyama, imibimbi, izimbotshana ezinkulu, njll., ngemva kwesikhathi esithile sokusetshenziswa, zithuthukiswa ngokusobala. Isikhumba sithambile futhi siqina.
24k imaski yegolide Ukuthi ingabe ingcwele ngempela njengoba kunamahemuhemu kuncike emugqeni womkhiqizo oyikhethayo. Ngoba umkhiqizo ngamunye uzoba nendlela ehlukile yokulungiselela kanye nohlu lwesithako. Abasebenzisi kufanele bacwaninge ngokucophelela ukuze bakhethe umkhiqizo olungile. Ikakhulukazi, ukuze ukwandise izinzuzo kanye nokuvikela isikhumba, kufanele ugweme ukuthenga imikhiqizo eshibhile. Kukhona nokulingisa okuningi kwemikhiqizo yangempela, ngakho-ke qaphela ukuthi ungafaki isikhumba sakho engozini.
Mhlawumbe unentshisekelo: [Review] Amamaski E-Acne Aphezulu ayi-8 Alungile Ukwenza Amabala Amnyama abe mhlophe
Xem Thêm [Review] Top 10 trà giảm cân nào tốt hiệu quả bán chạy 2022 | Muasalebang